Shirka Musharaxiinta Madaxweynaha oo maanta la soo gabagabeynayo iyo war murtiyeed…. – AfmoNews
Shirka Musharaxiinta Madaxweynaha oo maanta la soo gabagabeynayo iyo war murtiyeed….
Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya oo shirkooda galay maalintii saddexaad ayaa maanta la filayaa in la soo gabagabeeyo shirkooda, iyadoo lagu wado in laga soo saaro war murtiyeed.
Ilo ku dhow dhow shirka ayaa sheegaya in shirka maanta lagu wado inuu ka soo qeyb galo Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo si weyn uga soo horjeestay Guddiyada doorashada.
Musharaxiinta ayaa shalay shirar gaar gaar ah la qaatay Ururada Bulshada Rayidka, Odayaasha dhaqanka iyo Culumaa’udiinka, waxaana ay la wadaageen aragtidooda xaalada dalka iyo muranka ka taagan doorashooyinka.
Culimada Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in xal laga gaaro muranka doorashada, isla markaana la qabto doorasho xor iyo xalaal ah, sidoo kale waxay ku baaqeen khilaafka ka jira doorashooyinka lagu xaliyo wada hadal.
Si kastaba ha ahaatee waxaa isha lagu hayaa go’aamada ay soo saari doonaan Musharaxiinta Madaxweynaha oo horay uga digay qalqal siyaasadeed iyo mid amni oo ka dhashay isku dayga dowladda ku dooneyso qabashada doorasho aan lagu wada qanacsaneyn.
Previous articleAbiy Ahmed oo 72 saacadood u qabtay inay isku dhiibaan Maamulka TPLF